Mogadishu Journal » Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo gaaray gobolka Shabeellaha hoose
Mjournal : — Wararka naga soo gaaray gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya in mas’uuliyinta ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaareen deegaanno ka tirsan gobolka.
Mas’uuliyiinta gaartay gobolka Shabeellaha hoose gaar ahaan deegaannka Lambar 50 ayaa ka socday wasaarrada gaashaandhiga ayaa la sheegay in ay halkaa ku tageen sidii ay u qaadi lahaa isbaarooyinka yaalla qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha hoose.
Laakiin wrarka hoose ee ka soo baxaya kulamo ay halkaa ku yeesheen mas’uuliyiinta ka soctay wasaarrada gaashaandhiga iyo qeybaha bulshada Lambar 50 leysku fahmi waayay ujeedada socdaalka wafdiga oo ay ku gacan seyreen bulshada ku dhaqan deegaannka Lambar 50 oo sheegay in ay isbaarooyinka yaalla halkaa qeyb ka qaataan sida ay hadalka u dhigeen sugida ammniga.
Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca wafdiga gaaray gobolka Shabeellaha hoose, hasse ahaatee waxaa ay wararku sheegayaan in kulan halkaa ay kula yeesheen qeybaha bulshada uu ku soo dhamaaday buuq iyo is afrad la’aan.
Gobollka Shabeellaha hoose waxaa ka taagan xiisado coladeed oo ka dhashay isbaarooyinka halkaa ku yaala ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo qaab beelleed u abaabulan, waxaana xusid mudan in marar badan oo leysku dayay qaadista isbaarooyinkaas lagu guul-dareystay.
Waftiga ayaa la sheegayaa in ay xalay goor danbe gaareen magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha hoose sida uu xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Max’ed Cismaan Yariisoow oo sheegay iney maanta kulamo la qaadanayaan waftiga ka socda dowladda ee gaaray gobolkaas.